संसद् विघटनबारे अन्तिममा आयो गोकुल बाँस्कोटाको यस्तो प्रतिक्रिया - Himali Patrika
संसद् विघटनबारे अन्तिममा आयो गोकुल बाँस्कोटाको यस्तो प्रतिक्रिया
हिमाली पत्रिका ५ पुष २०७७, 9:58 pm
काठमाडौँ । नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बाध्यात्मक अवस्थाले नै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको निर्णय गरेको बताएका छन् ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको घेराबन्दीका कारण प्रधानमन्त्री संसद् विघटनको निर्णयमा पुगेको बाँस्कोटाले बताए । सरकारले संसद् विघटन गरेर कुनै गल्ती नगरेको उनको दाबी छ ।
‘संसद् विघटन के ठूलो कुरा भयो र ! लोकतन्त्र खोसिएको भएपो ! जनताले नै फैसला लिने निर्णय गर्दा लोकतन्त्र झन् बलियो हुन्छ । केही गठजोडबाट जनताले चुनेका प्रधानमन्त्रीलाई हट् भन्ने ?,’ बाँस्कोटाले भने, ‘कोठाभित्र थुनेर दनादन कुट्न थालेपछि घाँटी न्याकिदिएको हो ।
तर लोकतन्त्र न्याकेको छैन । प्रजातन्त्र न्याकेको छैन । जनतातिर नै फर्काइदिएको छ । अब चुनावबाट जितेर आउने, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुने ।’
राजनीतिलाई षड्यन्त्रको भाँडो बनाएपछि डेमोक्रेटिभ लिडरले गर्न पर्ने काम गरिदिएको नेता बाँस्कोटाले बताए ।
‘राजनीतिलाई षड्यन्त्रको भाँडो बनाएपछि डेमोक्रेटिभ लिडरले गर्न पर्ने काम गर्नुभयो । उनीहरुले बलिङ गरेर हैरान पारे । प्रधानमन्त्रीले ब्याटिङ गर्नुभयो । बल अब जनताको कोर्टमा गयो । जे गर्छन् जनताले गर्छन्,’ बाँस्कोटाले भने ।
संयुक्तरुपमा विरोध गर्ने तीन दलको निर्णय
बैठकमा सहभागी कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने आजको अनौपचारिक बैठकमा सरकारको कदमविरुद्ध संयुक्त रुपमा तीन दल विरोधमा उत्रन सहमत भएको बताए । उनले सोमबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी विरोधका विषय ठोस निर्णय लिइने पनि कान्तिपुरसँग बताए ।
कांग्रेसको तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, नेता मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी थिए । यस्तै, जसपा नेता बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो बैठकमा सहभागी थिए ।